PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: November 2013
တရုတ်ကာကွယ်ရေးဇုန်သစ်ထဲ ဂျပန်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယား ဖြတ်ကျော်
နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ၂၀၁၃
တရုတ်နိုင်ငံ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဇုန်သစ်ထဲကို ဂျန်ပန်နဲ့ တောင်ကိုးရီးယား နှစ်နိုင်ငံက စစ်ရဟတ်ယာဉ်တွေက ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကပဲ အငြင်းပွားနေတဲ့ အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကို တရုတ်နိုင်ငံက လေကြောင်းကာ ကွယ်ရေးဇုန်အသစ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီး အဲဒီအပေါ်ကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဘယ်ယာဉ်မျိုးမဆို တရုတ် နိုင်ငံကို အသိပေးရမယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
မကြာခင်ကလည်း အမေရိကန် ဗုံးကျဲလေယာဉ် B-52 နှစ်စဉ်းကလည်းအဲဒီ သတ်မှတ်ဇုန်ထဲကို တရုတ်နိုင်ငံကိုအသိမပေးပဲ ဖြတ်ကျော် ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို လေကြောင်း ကာကွယ်ရေးဇုန် သတ်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံကို သြစတြေးလျနိုင်ငံအပါအ၀င် နိုင်ငံတော်အများများက ဝေဖန်နေကြတာ
အစိုးရတပ်များ ... သျှမ်းပြည်အတွင်း တာဝန်ကျ လှုပ်ရှားပြီး အပစ်ရပ်ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ့များအား တိုက်ခိုက်နေရသောကြောင့် တပ်မှထွက်ပြေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးသင်တန်းတက် ရောက်နေသည့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြော
Posted by PNSjapan at 10:13 AM0comments
“သူတို့က အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တာကို ကမ္ဘာကို ပြနိုင်ရင် နိုင်ငံခြားက ကူညီမှုတွေ ပိုရမယ်ဆိုတဲ့ သဘော ထား မျိုးနဲ့ သွားနေတဲ့ ပုံပေါ်တယ်။ တကယ့် နားလည်မှု အခိုင်အမာမရှိသေးဘဲနဲ့
ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းကျော် တန်ကြေးရှိ Rolls Royce ကားအား တင်သွင်းမည်ဆိုပါက အကောက်ခွန် ကျပ်သိန်း ၁၉၆၀၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ်သိန်း ၁၇၁၅ နှင့် ကညနယာဉ် မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ်သိန်း ၄၈၉၀ ကျော်၊ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း ၈၅၀၀ ကျော်အထိ ပေးဆောင်ရမည်
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာ ပါတီအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်တို့နှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ပါက ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စရပ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဟု ယူဆကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီ စုစုပေါင်း ၅၀ ကျော် ရှိသည့်အပြင် အခြေခံဥပဒေမှာ ပြည်သူအားလုံးနှင့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆစ်ဒနီမြို့မြန်မာမိသားစုတွေ့ဆုံပွဲ မိန့် ခွန်း
ရန်ကုန်-မန္တလေးရထားလမ်းကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ လှူဒန်း
ရန်ကုန်-မန္တလေး ရထားလမ်းကို ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ တပ်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေ၊ ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ဗဟိုမှရထားပြေးဆွဲမှု ထိန်းချုပ်ခြင်း နည်းပညာကိုလည်း စတင်ပြုလုပ်မည်
Posted by PNSjapan at 10:11 AM0comments
ထူးထူးဆန်းဆန်း သတင်းပါဘဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖူဂျီရေခဲတောင်နဲ့ နီးတဲ့ အနောက်မြောက်ဘက်မှာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ တော်အုပ် တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ တောအုပ်ကိုတော့ သေကြောင်းကြံတဲ့ “တော” လို့ ကမ္ဘာမှာ လူသိများပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ မိမိကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံချင်သူများဟာ ဒီ တောထဲသို့ လာရောက်ကြပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်သေကြပါတယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် မှတ်တမ်းစာရင်းများအရ ၇၃ ဦး၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ် မှာ၇၈ ဦး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ၁၀၀ ဦး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ၅၄ ဦး တို့မှာ သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ သူတွေရဲ့ စာရင်းများဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းအစဉ်အဆက် ကတည်းက ဖြစ်နေတာပါတဲ့။
မရှိဘူး ဆိုရင်တောင် တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး (၃၀) ဦး သေကြောင်း ကြံစည်ခဲ့ပါသတဲ့။ ဒါကြောင့် တော တစ်ဝှိုက်မှာတော့ အစောင့်ရဲများ ချထားရပါ တယ်။ သေကြောင်း မကြံစည်ရန် သတိပေးစာတွေကို
Posted by PNSjapan at 9:46 AM0comments
သြစတြေးလျနိုင်ငံကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ University of Sydney နဲ့ University of Technology တက္ကသိုလ်တွေကနေ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ၂ခု လက်ခံရယူပါတယ်။
Copy from - DVBTV
တိုင်းရင်းသားများ လိုချင်သည်မှာ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ယခုအချိန်ထိ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှု အပြည့်အ၀ မရှိသေးသည့်အတွက် လက်နက်ကိုင်ပြီး ဆက်လက်ရပ်တည် နေဦးမည်ဖြစ်ကာ ဆွေးနွေးခွင့်ရပါက ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယခင်က လက်နက်မကိုင်ဘဲ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ အသိအမှတ်ပြု လုံးဝမခံရဘဲ ဖိနှိပ်မှုများသာ ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး
အထက်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် နှစ်ဖက်တပ်မှ ပစ်ခတ်မှုသည် ယနေ့ ခေတ္တငြိမ်သက်နေသော်လည်း ပေါက်ကွဲမှု များဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး အစိုးရတပ်မှ စစ်အင်အားများတိုးချဲ့ကာ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေး နှင့် ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ထူထောင်ရေး အတွက် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ(UNFC)နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
“စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကြီး ပေါ်ပေါက်လာဖို့ ကျနော်တို့ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကကျနော်တို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အစည်းအဝေးပွဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ အပြင်မှာနေတဲ့လူတွေက လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း ၀င်တိုးလို့မရဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အနေအထားအရ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း ပြင်ဖို့ မလွယ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် အန်ကယ် တို့ကတော့ အသစ်ရေးတာကတော့ မြန်တယ်။ လွယ်တယ်လို့ပဲ ယူဆတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးတော့ အဲဒါကို ပြောပြတာ´´ဟု
မိကျောင်းကန်ပြည်သူများ ဒုတိယသပိတ် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာ
မိကျောင်းကန်ပြည်သူများအား ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲ တွင် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးမူ့ မရှိလျင် ဒုတိ သပိတ် သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် ထပ်မံဖွင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း အများပြည်သူများသိစေရန် ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်
ပြည်တွင်းစစ်ဟာ လူမျိုးတန်းတူရေးပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင်လို့ ဖြစ်ရတာဟု UNFC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာ ပြော
ဟားခါးချင်းစာနဲ့ ကချင်စာ အက္ခရာတွေက အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေနဲ့ မို့လို့ ဆိုပြီး ကိုယ့်စာကိုယ် တရားဝင် သင်ယူခွင့်မပေးတာတွေ၊ ဝစာတွေက တရုတ်စာလုံးတွေမို့လို့ သင်ခွင့်မရှိတာတွေ၊ မြန်မာ့သမိုင်းတစ်လျှောက် မင်းနေပြည်တော်ပေါင်း ၂၀နီးပါးလောက်ရှိခဲ့ရက်သားနဲ့ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကျငမ်းဆိုတဲ့ စာလုံးကို မန္တလေးနန်းတော်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခုထဲနဲ့ တွဲတွဲပြီး ပြတာတွေ၊ တခြားတိုင်းရင်းသား ဘုရင်တွေရဲ့ နန်းတော်တွေ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုတော့ တော်ရာ ချောင်ထိုး ဘေးချိတ်ထားပြီး သီဟာသနပုလ္လင်ကြီးကျတော့မှ သမ္မတ ဧည့်ခန်းမအလယ်တည့်တည့်မှာ မျက်နှာပြောင်တိုက် ထည့်ထားတာတွေ၊ အနော်ရထာ မွန်ပြည်ကို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်တော့ ဘုန်းလက်ရုံး ဆန့်တန်းတယ်၊ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်တယ်လို့ သုံးပြီး အင်းဝကို ရှမ်းသိမ်းပိုက်တော့ အင်းဝပြည်အားနဲနေတုန်း အခွင့်ကောင်းယူတယ်လို့ သမိုင်းစာအုပ်ထဲ ရေးထားတာတွေ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက လူမျိုးပေါင်းစုံကို မတူတူအောင် အတင်း ညှိယူနေတာတွေ (ဥပမာ နွေမှာတောင် အရမ်းချမ်းတဲ့ ရှမ်းတောင်၊ ကချင်တောင်ပေါ်နဲ့၊ ချင်းတောင်တန်းတွေပေါ်က မြို့တွေမှာ မြန်မာ့ရိုးရာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီး အတင်းတပ် မြန်မာ့ရိုးရာမဟာသင်္ကြန် ဆိုပြီး အစိုးရဦးဆောင် အတင်းလုပ်နေတာတွေ၊ (အဲ့လိုကြေးဆို ကရင် ဝါးညှက်ပွဲတို့ ချင်း ကောက်သစ်စားပွဲတို့ကျတော့ အစိုးရဦးစီးပြီး နိုင်ငံနဲ့ အဝှမ်း ဘာကြောင့် လုပ်မပေးသလဲဆိုတာ မေးစရာ ဖြစ်လာပြီ)၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကို ဆောက်တော့ မြန်မာဘုရင်တွေရဲ့ ရိုးရာ ကနုတ်တွေနဲ့ ပဲ တန်ဆာဆင်ပြီး ဆောက်တာတွေ (အတွင်းမှာလဲ မြန်မာ့ရိုးရာဆွမ်းအုပ်ပုံ ရုပ်ထုအကြီးစားတစ်ခု ဆောက်ထားသေးတယ်၊ ဆွမ်းအုပ်ကို မြင်တောင် မမြင်ဖူးတဲ့ ပြည်တောင်စုသားတွေ ပုံလို့)၊ လွှတ်တော်ရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ကုန်းဘောင်ဘုရင် လွှတ်တော်မှာသုံးတဲ့ ရွှေကျိုင်းကြီး ထမ်းထမ်းလာတာတွေ.... ဆက်ပြောရင် C60 ၂ခွေစာလောက် ပြောလို့ရသေးတယ်။ ပြောချင်တာက တန်းတူညီမျှအောင်လို့ဆိုပြီး ရှိသမျှ ၁၃၅ မျိုးလုံးရဲ့ ရိုးရာတွေအားလုံး အကုန်လိုက်ပြီး လေးစားပေးဖို့ ထည့်သွင်းပေးဖို့ မတောင်းဆိုပါဘူး၊ အဲ့လိုသာဆို လွှတ်တော်အမိုးပေါ်မှာ ငှက်အတောင်မွှေးတွေရော၊ ကျားအစွယ်ပုံတွေ၊ ဝက်အစွယ်ပုံတွေ၊ ဖားစည်ပုံတွေ၊ ကနုတ်တွေ အကွက်တွေနဲ့ ကြည့်လို့ ကောင်းမယ်မထင်ဘူး။ ငွေစက္ကူတွေမှာလဲ မနောကွက်တွေ၊ ရှမ်းအိုးစည်တွေ၊ ဟင်္သာတွေနဲ့ ပွစာကြဲသွားမယ်။ ဖြစ်သင့်တာက ဘယ်သူ့ ရိုးရာ ထုံးစံကိုမှ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်သရောင်ရောင် ညစ်ကွက်ဖမ်းပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်မထုတ်ကြဖို့ပဲ (ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ ကနုတ်တွေနဲ့၊ ဗုဒ္ဓဝင်ရုပ်လုံးရုပ်ကြွတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်တာမျိုးကိုတော့ ဘယ်တိုင်းရင်းသားကမှ မလိုလားနိုင်ပဲ မရှိလောက်ပါဘူး၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုသာ အဓိကထား ပြောနေရတာ)ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဓာတ်ငွေ့တွေ သေလောက်အောင်ထွက်ပြီး ရခိုင်သားတွေ လျှပ်စစ်မီတာ ၁ယူနစ် ၅၀၀ ပေးသုံးရတယ်ဆိုတာ လူကြားလို့တောင် မကောင်းဘူး။ တစ်ကယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရခိုင်လူမျိုးကပဲ ထိရောက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်တွေလဲ ဖြစ်နေစရာ အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ သူစိမ်းကကိုယ့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ အမျိုးချင်းချင်း မုန်းသလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
— with Aow Kou Rot
တချိန်တည်းမှာပဲ လက်ရှိအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ ရှပ်နီဝတ်တွေကလည်း ဘန်ကောက်က အားကစားရုံထဲမှာ နေရာယူ စုဝေးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ အတိုက်အခံတွေဘက်က ဆန္ဒပြမှုတွေ မရပ်မချင်း သူတို့ကလည်း အားကစားရုံကနေ ဖယ်မပေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၀ က လူတွေ သေကြေတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့လမ်းမတွေ ပေါ်က ဆန္ဒပြပွဲတွေ နောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားတဲ့ အကြီးဆုံးလူထုဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပြီး လက်ရှိအစိုးရကို ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေ ကြား ဖြစ်ပွားတဲ့
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလ သုံးနှစ်ဝန်းကျင် ရောက်လာချိန်တွင် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ ယင်းနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေသည့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက် သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ၊ သဘောထားထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများ အရှိန်မြှင့်လာခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပါတီများ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့ ၌ နိုဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၃ရက်များတွင် တွေ့ဆုံနိုင်ရန် အစိုးရက ပထမဆုံး စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့သည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲဆိုင်ရာများ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သဘောထားများ သိရှိနိုင်ရန်နှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် တပ်မတော်၏ လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍ၊ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ခိုင်မာစေရန် သဘောထားအမြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC
Posted by PNSjapan at 7:53 PM0comments
ပြည်သူ့စစ်အပါအဝင် အင်အား ၃၀၀ ခန့်ရှိသော ထိုမြန်မာစစ်ကြောင်းသည် ထိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာမှ ဆုတ်ခွာကာ သာပန်းကုန်းတောင်ပေါ်အနီး ဝါရော့ရွာသို့ ပြန်လည်တပ်ဆုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရရှိသူ ၂၀ ကျော်မှ ဒါဏ်ရာပြင်းထန်သူ ၁၀ ဦးကျော်ကို ငေါ့ငှားရွာဘက်မှတဆင့်
"ဒီနေ့ဘာရလာဒ်တွေထွက်လာသလဲဆိုတော့ လိုင်ဇာညီလာခံမှာ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ဒါစိုးရိမ်စရာပဲဗျ။ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခုထွက်သွားတယ်။ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဆိုတာ လက်ရှိတပ်မတော်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ။ ဥပမာ ဗိုလ်သင်တန်း တက်ဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေကို အများကြီးခွင့်ပေးမယ်။ လက်ရှိတပ်မတော်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ အများကြီးပါဝင်လာစေချင်တယ်ဆိုတဲ့
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းအား အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူ ခြောက်ဦး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်တစ်လချမှတ်
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်မှုအား အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုအပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့သူ ခြောက်ဦးကို ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ငွေဒဏ်မပါဘဲ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ်တစ်လစီ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်က ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသူများမှာ မသန္တာ၊ စိုးမိုးထွန်း၊ မိုးသွေး၊ ဒီငြိမ်းလင်း၊ မြင့်ကျော်ဦး၊ အောင်မျိုးဦး တို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအမိန့်ကို ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် တရားရုံးမှ မြို့နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီက ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။...
''လက်ပံတောင်းတောင်အရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူတွေကို အလုပ်ကြမ်း ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တယ် ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပုဒ်မ ၁၈ မှာ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးစလုံးလဲ ချမှတ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနိုင်ငံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူငယ်တွေကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ် တယ်ဆိုတာ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနေသူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချိုးနှိမ်သလိုပါပဲ'' ဟု ရန်ကုန်ပြည်သူ့ အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်မှ ကိုဝေဠုက နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် The Daily Eleven သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရသူများမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် နှင့် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တို့တွင် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုနှင့် လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍
ဦးသန်းရွှေ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်မိသားစု ငွေအများဆုံးပါဝင်၍ ဦးတေဇ အမည်ခံ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော အာရှစိမ်းလမ်းဘဏ် AGD Bank မှ အပ်ငွေများ ကိုလည်း နေပြည်တော်ဘဏ်ခွဲ နှင့် အခြား မြို့နယ်
တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ကွန်ပြူတာဆိုင်ဘာ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်ဖို့ ညွှန်ကြားနေသလို ကိုယ်တိုင်လည်း လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလို ထောက်လှန်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် ဒဏ်ခတ်
ထိုတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရောက်ရှိနေသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) မှ ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်သည်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ချင်းမိုင်မြို့သို့
(င) တပ်မတော် ကွပ်ကဲမှု အောက်ရှိ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ များသည် အပစ်ရပ် နယ်မြေ များသို့ သွားလာရန် လိုအပ် လာပါက အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မီတီ၏
ချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့ KIA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ဟာ ကချင်ပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့သလို သတင်းမီဒီယာတွေ နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်းက တင်ပြထားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ (၁၃) ရက်တွင် အစိုးရ ခမရ ၅၀၆ နှင့် ၅၀၅ စစ်ကြောင်းတို့ သည် (TNLA) တပ်ရင်း ၂၅၆ တပ်စခန်းသို့ စစ်ဆင် ခဲ့သဖြင့် နမ့်ဆန်မြို့နယ် တာလဲတ် ကျေးရွာနှင့် ကလန်ဒါန်းရွာ အကြား၌ ညနေ (၃)နာရီတွင် မိနစ် (၄၀)ကျော် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ တပ်များသည် လက်နက်ကြီး အဆက် မပြတ် ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့် စစ်ဆင်ခဲ့ပြီး အထိအခိုက် အကျဆုံးများ ခဲ့ရှိသဖြင့် မိနစ်(၄၀)ကျော်အတွင်း စစ်မဆင်
နေပြည်တော် NLD ပါတီဟောပြောပွဲ ခွင့်ပြုချက်မပေးရန် ကန့်ကွက်ခဲ့သူမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး လည်းဖြစ် နေပြည်တော် ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သူ ဦးသိန်းညွှန့် ဖြစ်ကြောင်း၊ နေပြည်တော် ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းညွှန့်သည် တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိသာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဦးသန်းရွှေနှင့် အလွန်နီးစပ်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် နေပြည်တော်
နှစ်ပေါင်းများစွာ အခွင့်အခါစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ ကျူးကျော်လိုသူတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ.အားနည်းချက်၊ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ. ဆင်ခြင်မှုအားနည်းချက်တွေနဲ. မညီညွတ်ကြတဲ့ သဘောထား ကွဲပြားမှုတွေအပေါ် အခြေခံပြီး သူတို.ရဲ. ကျူးကျော်စစ်ကို တစတစ တိုးမြှင့်လာခဲ့ကြတယ်။ အခုလဲ သူတို.တွေ လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကော်မတီက နောက်တစ်ဆင့် တက်ဖို.သူတပါးနိုင်ငံရဲ. ပြည်တွငိးရေးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စွက်ဖက်ဖို.ကြိုးစားလာကြပြန်ပါပြီ။ တကယ်တော့ ကုလသမဂ္ဂ ဆိုတာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံပေါင်း ရာကျော်ဖွဲ.စည်းထားတဲ့ OIC ရဲ.
သို့သော် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အပြင် နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင်လည်း တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ် ခဲ့သည်ဟု နန့်လင်းပါ ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော The Daily Eleven
အလားတူ ပေါက်တောမြို့နယ်၊ အနောက်ဖရုံကာကျွန်း၊ စိုးမဲကျီကျေးရွာမှ ခမီး လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးရွှေမိနှင့် ဒေါ်ဝါ၀ါဦးတို့၏ သမီး အသက်(၅)နှစ်အရွယ်သည်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ တန်ဆောင်မုန်း လပြည့် ညနေ ၆ နာရီခန့်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးနောက် ရက်စက်စွာ
KIA ဒု-စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် ရန်ကုန်ရောက်၊ ဘားအံညီလာခံအတွက် အစိုးရနှင့် ညှိနှိုင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ကျင်းပမယ့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ အစည်းအဝေးကို တက်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်နေတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်ဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာ သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမှာကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကြား ညီလာခံအတွက် အစိုးရရဲ့ မူကြမ်းတွေကို သုံးသပ်နေပြီး ဆွေးနွေးမယ့်အချက်အလက်တွေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ Business Alliance ဟိုတယ်မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ တန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံတဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ဖို့ လိုင်ဇာနဲ့ မြစ်ကြီးနားဆွေးနွေးချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတာဟာ ရှေ့ဆက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကြမ်းဖျဉ်း ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဘားအံညီလာခံကြီးအတွက် မြစ်ကြီးနားက ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမယ့်အကြောင်း၊ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ ရန်ကုန်ကိုလာတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်ဟာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ မနက်ပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး KIA ရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နဲ့ မြန်မာအစိုးရတပ်ကြား ၂ဝ၁၁ခုနှစ် ဇွန်လကစပြီး တိုက်ပွဲတွေ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ချိန်ကစပြီး ကြီးမားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် တိုက်ပွဲငယ်တွေ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရင်းမြစ် - ကမာရွတ်
နေပြည်တော်၌ ပြုလုပ်သော NLD ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းပွဲ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒ သဘောထား ကောက်ယူပွဲကို နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ဆန္ဒမဲပေးသူ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်းကဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရန် ထောက်ခံခဲ့သည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ပြည်သူ လူထုသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ လူထုသဘောထား ရယူပွဲသို့ နေပြည်တော်ခရိုင် အတွင်းရှိ ပါတီဝင်များ၊ ဒေသခံများ နှစ်သောင်းဝန်းကျင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၅၀၀၀ ခန်.က ဆန္ဒမဲပေး ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းလူထုသဘောထား ကောက်ခံပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်းကို ဖတ်ကြားခြင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်မှ ဥပဒေပညာရှင်များဖြစ်သူ ပြည်သူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့် ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဦးအောင်ကြည်ညွန့်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၏ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် မကိုက်ညီသည့် အချက်များ၊ နိုင်ငံသား တို့၏
ယခု ကဲ့သို့ တွေ့ဆုံ နိုင်ခြင်း အားဖြင့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား ပါတီ များအကြား ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း အမြင် ဖလှယ် ဆွေးနွေး နိုင်ကြမည် ဖြစ်ပြီး “၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ” ပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စရပ် များကိုလည်း ဆွေးနွေး နိုင်ကြမည် ဖြစ်ကြောင်း (UNFC) ၏ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ဖြစ်သူ
Posted by PNSjapan at 9:20 AM0comments
မြန်မာတပ်မတော် ခလရ ၁၁၄၊ ခမရ ၅၀၆နှင့် ခမရ ၅၀၃ စစ်ကြောင်းတို့သည် နမ့်ဆန်မြို့နယ် နှင့် မန်တုံမြို့နယ် တွင်အခြေစိုက်နေသော တအန်းတပ်မတော် တပ်ရင်း ၂၅၆ နှင့် တပ်ရင်း ၃၆၇ တို့အား ၁၃၊ ၁၄ နှင့် ၁၆ ရက်တို့တွင် ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သဖြင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြရာ မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အနည်းဆုံး ၅ ဦးကျဆုံးပြီး ၆ ဦး ဒါဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။...
၁၆ ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာလတွင် မန်တုံမြို့နယ် မန်မောက်နှင့် တန်တေရွာအကြားရှိ TNLA တပ်ရင်း ၃၆၇ တပ်စခန်းသို့ မြန်မာတပ် ခမရ ၁၁၅ နှင့် ခလရ ၁၃၀ တို့ အတင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရာ နံနက် ၆း၃၀ နာရီမှ ၇း၃၀ နာရီခန့်ထိ အပြင်းအထန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုတိုက်ပွဲတွင် မြန်မာတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂
ပွဲတော်လာသူများ၏ စားရေးသောက်ရေးအတွက် ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီက ထမင်းဟင်းလျာများဖြင့် စတုဒီသာ မဏဏ္ဍပ်တွင် အလွှာမရွေး မျဉ်းတပြေးဖြင့် ဧည့်ခံမည်ဟု ကျွေးမွေးရေး
ဥပဒေ အထက် ဖိုးလပြည့် ရဲ့ လူမိုက်ဂိုဏ်း စီနီယာတွေ ထွက်လာပြီ....
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှ ယနေ့ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ကြသော ကိုကျော်နေ၀င်း နှင့် ကိုအေးနေ၀င်း
(ဓာတ်ပုံ- ခင်မောင်ဝင်း (ရွှေအင်းသား))
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံသို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေး ကော်မတီက စိစစ်တင်ပြခဲ့ပြီးနောက် အကျဉ်းသား ၆၉ ဦး ကို ယနေ့ ပြစ်ဒဏ်က လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုရာမှ ဦးနေ၀င်း၏ မြေး ၂ ဦးလည်း
Posted by PNSjapan at 10:48 AM0comments
“ညီလာခံကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျင်းပမယ်။ ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဘားအံကို သွား မယ်။ ၁၉ ရက်နဲ့ ၂၀ ရက်နေ့မှာတော့ UPWC နဲ့ “တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး” အတွက် ဆွေးနွေးမယ်လို့ စီစဉ်ထားတယ်။”
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအတွက် လိုင်ဇာမှ ရရှိလာသည့် ညီညွှတ်ရေးကို KNU ဌာနချုပ် ၌ ကျင်းပမည့် တိုင်းရင်းသားကွန်ဖရင့်၌ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း UNFC
မတရားသင်းဆက်သွယ်မှုဖြင့် ကချင်ဒုက္ခသည် (၄) ဦးကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးနေစဉ်မှာပဲ ကချင်ပြည်နယ်မှာ မတရား အသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည် ၄ ဦးကို ထောင်ဒဏ်တွေ အသီးသီးချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် တရားရုံးတွေမှာ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ စွဲဆိုခံထားရသူ ၆ ဦးအနက် ၄ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးမားခါးက ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ စတင်ပြီးတော့ မြစ်ကြီးနားခရိုင်နဲ့ မြို့နယ်ရုံးတွေက ပေါက်ကွဲမှု၊ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတာ ဖြစ်ပြီး အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ ထောင်ဒဏ်တွေကတော့ မတရားအသင်း ဆက်သွယ်မှုနဲ့ မြို့နယ် တရားရုံးက ချမှတ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်ခံရတဲ့သူတွေကတော့ ဦးလဖိုင်ဂမ်၊ ဦးဘရန်ရုန်း၊ ဦးဇော်ဘောက်၊ ဦးလရိန်တို့ ဖြစ်ပြီး ကချင်စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည်တွေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နဲ့အမှုတွဲဖြစ်တဲ့ တာလောကြီးကျေးရွာက ဦးလမာအောင်နဲ့ ဦးခယာနန္ဒတို့ ကတော့ ထောင်ဒဏ်ကနေ ကင်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ စီရင်ချက် ချမှတ်ခံထားရသူတွေဟာ မြစ်ကြီးနားခရိုင် တရားရုံးက စွဲဆိုထားတဲ့ ပေါက်ကွဲမှု စွဲဆိုချက်တွေနဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ ဦးမာခါးက
ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံတော် အကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၆၉) ယောက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၆၉ ဦးကို ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ အကျဉ်းထောင်များကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်-
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှ (၃) ဦး
မန္တလေး အကျဉ်းထောင်မှ (၁၀) ဦး
မြင်းခြံ အကျဉ်းထောင်မှ (၃) ဦး
သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှ (၂) ဦး
တောင်ငူ အကျဉ်းထောင်မှ (၆) ဦး
ရွှေဘို အကျဉ်းထောင်မှ (၄) ဦး
မုံရွာ အကျဉ်းထောင်မှ (၂) ဦး
ပုသိမ် အကျဉ်းထောင်မှ ( ၁) ဦး
သထုံ အကျဉ်းထောင်မှ (၁) ဦး
အင်္ဂဘို ရဲဘက်စခန်းမှ (၁) ဦး
ဗန်းမော် အကျဉ်းထောင်မှ (၂) ဦး
မြစ်ကြီးနား အကျဉ်းထောင်မှ (၅) ဦး
သီပေါ အကျဉ်းထောင်မှ (၃) ဦး
ကျိုင်းတုံ အကျဉ်းထောင်မှ ( ၁) ဦး
ကျောက်ဖြူ အကျဉ်းထောင်မှ (၁၀) ဦး
သံတွဲ အကျဉ်းထောင်မှ (၄) ဦး
ဘူးသီးတောင် အကျဉ်းထောင်မှ (၂) ဦး
စစ်တွေ အကျဉ်းထောင်မှ (၉) ဦး
Copy from - Former Political Prisoners
(၇)နှစ်အရွယ် ကချင်ကျောင်သူလေးအား မြန်မာ့တပ်မတော်သားတစ်ဦး မုဒိမ်းကျင့်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ၊ သိန္နီမြို့ အနီးရှိ ရေပူရွာ ရှိ အဖ ဦး... နှင့် အမိ ဒေါ်... တုိ့သည်(၁၁.၁၁.၂၀၁၃)ရက်နေ့ နံနက် (၈)နာရီခန့် တွင်(၇) နှစ်အရွယ်သမီး မ...နှင့် သမီးငယ်(၆)လ တို့ (၂) ယောက်အား အိမ်တွင်ထားခဲ့ ပြီး တောင်ယာသို့ သွားရာကြရာ သိန္နီအခြေစိုက် မြန်မာအစိုးရ စစ်တပ် (ခ.မ.ရ-၃၂၃)တပ်မှ စစ်သား မောင်ဝင်းထွေး (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်-တ/၃၃၇၀၇၆) သည် ကလေးမလေး (၂)ဦးရှိရာ အိမ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ကလေးမလေး နှစ်ဦးအား အိပ်ခန်းထဲသို့ ပွေ့ချီ သွားကာ အငယ်မအားဘေးတွင်ချထားပြီး အကြီးမ မ.... အသက်(၇)နှစ် ၀တ်ဆင်ထားသောဘောင်းဘီအားချွတ် ခိုင်းပြီး မုဒိမ်းကျင့် ခဲ့ကြောင်း ၊ မ...မှ အနီးပတ်ဝန်းကျင်သို့ အဖွား... အမေ... ဟု အော်ဟစ်အကူအညီ တောင်းသောကြောင့် ၄င်းစစ်သား မှ ကလေးမအား ပါး (၂)ချက် ရိုက်ခဲ့ကြောင်း ကလေးမလေး မ... ၏ပြောပြချက်အရသိရှိရပါသည်။
သတင်းနှင့် ဓာတ်ပုံ- Lachid Kachin (15-11-2013)
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Bill Clinton ဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ရောက်ရှိ ရုပ်သံသတင်း
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း Bill Clinton ဟာ ဒီနေ့ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကို တွေ့ဆုံပြီး "ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနဲ့ မတူ ကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးစုများ" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို RFA သတင်းထောက် ကိုသီဟထွန်း က တင်ပြထားပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသကို စစ်ကိုင်းလုံခြုံရေး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး လာရောက် ဖြေရှင်းပေမယ့် ပြေလည်မှု မရ
လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံတွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွင့်ဝင်တွေ တင်းမာမှု ဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို စစ်ကိုင်း လုံခြုံရေး နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး လာရောက်ဖြေရှင်းပေမယ့် ပြေလည်မှု မရသေးပါဘူး။ ဒီသတင်းကို ဒေါ်ခင်မင်းဇော် ပေးပို့ထားပါတယ်။
တရုတ် နိုင်ငံဟာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေး အရ နောက်ထပ် တိုးတက်လာနေတဲ့ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်လို့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေး လမ်းကြောင်း ပွင့်လာတာကို ကျေနပ်တယ်လို့
၄ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရုတ်ပြည်သို့
အလည်အပတ်လာရောက်ရန် တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့မှ ဖိတ်ကြားမှုကို စစ်တပ်အတွင်းမှ မည်သို့